Hanokatra ny Torre de la Cautiva ho an'ny besinimaro ny Alhambra amin'ity volana ity ihany | Vaovao momba ny dia
Tamin'ny faran'ny taona 2016 dia voafidy ho tanàna tsara indrindra any Espana i Granada tamin'ny fifaninanana nokarakaraina tamin'ny tambajotra sosialy. Napetraka tamim-pahalalana tamin'ny faritra maro izy io satria toeran-tombo-kase fizahan-tany izay manome fahafaha-manao betsaka amin'ny fomba fijery ara-toekarena, kolontsaina ary fanatanjahantena ho an'ireo mpizahatany mitsidika azy.
Tahaka an'i Paris manana ny kisary ao amin'ny Eiffel Tower, ny tandindon'i Granada no Alhambra mahatalanjona. Manda mimanda mahavariana izay mandoka izay rehetra mandinika azy. Amin'izany fomba izany, ny Alhambra dia iray amin'ireo toerana tokony hitsidihanao farafahakeliny indray mandeha amin'ny fiainanao.
Raha tsara vintana ny mandeha any Granada mandritra ny volana Mey, dia hanana fotoana hijerena ny Torre de la Cautiva amin'ny fomba miavaka, izay mihidy ho an'ny besinimaro noho ny antony fiarovana. Fa inona ny tilikambon'ny babo?
Captive Tower | Sarin'ny Gazety Navarra
Izy io dia tilikambo fonenana naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX izay misy ny iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra amin'ny trano mimanda iray manontolo.. Eo amin'ny canine boribory amin'ny rindrina, tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia fantatra amin'ny anarana hoe Torre de la Ladrona y la Sultana na dia novana ho Torre de la Cautiva aza ilay anarana taty aoriana satria noheverina fa Doña Isabel de Solís, vehivavy kristiana iray izay dia nalain'i Sultan Muley Hacen ary nalaina an-keriny tamin'ny anarana hoe Zoraida, dia nalain'ny mpanjaka ho vadin'ny vadiny ary nataony izay tiany indrindra.
Na izany aza, araka ny notantarain'ny Board of the Alhambra sy ny Generalife, ity toerana ity dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe qalahurra amin'ny tononkalo epigrafika izay hita ao anatin'ny efitrano malalany. Ireo soratra eo amin'ny rindrina dia manambara ny maha-zava-dehibe ny fiarovana azy ao anatin'ny Alhambra any Granada sy ny toetrany amin'ny maha-tilikambon'ny tilikambo manana hatsarana lehibe.
Avy any ivelany, ny Torre de la Cautiva dia saika tsy mitovy amin'ny ambin'ny tilikambo Alhambra. Na izany aza, ny haingon-trano anatiny manankarena mahatonga azy io ho iray amin'ireo efi-trano mahavariana indrindra eto an-tanàna. Raha ny marina, ny Torre de la Cautiva dia manangona harena miaraka amin'ny Salón de Comares ny haingo sarotra indrindra amin'ny trano mimanda Nasrid.
1 Mampiavaka ny Torre de la Cautiva
2 Ahoana no ahatongavanao any Torre de la Cautiva?
3 Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mitsidika ny Torre de la Cautiva?
Mampiavaka ny Torre de la Cautiva
Inside Torre de la Cautiva | Saripika Ankehitriny Granada
I Sultan Yúsuf I (1333-1354) no nandidy hanamboarana azy toy ny tranobe hafa mandrafitra ny Alhambra any Granada toy ny Palacio de Comares na Puertas de la Justicia y de los Siete Suelos. Ny firafitry ny Torre de la Cautiva sy ny firafitry ny haingon-trano dia ny fotoana fahadiovana lehibe indrindra amin'ny kanto Nasrid.
Ny fametahana ny rindrina dia iray amin'ireo singa ilaina indrindra izay misy loko misy alokaloka samihafa. Anisan'ireo loko, misongadina ny volomparasy, izay ampiasaina amin'ny ceramika maritrano dia heverina ho miavaka tokoa. Misongadina ihany koa ireo cartouche epigrafika vita amin'ny tile izay manakaiky ny tapany ambony amin'ny baoritra. Ny lahatsoratra dia tononkalo iray nataon'ny vizier lehibe Ibn al-Yayyab, talohany ary mpampianatra an'i Ibn al-Khatib, vizier lehibe iray hafa an'ny tarana-mpanjaka.
Ahoana no ahatongavanao any Torre de la Cautiva?
Sary tao amin'ny Traveller
Ny rihana ambanin'ny tany dia niditra tamin'ny alàlan'ny lalana iray izay mitondra ny mpitsidika mankany amin'ny patio misy galeriana nosokafan'ny arches banked scalloped amin'ny telo amin'ny sisiny miaraka amin'ny fametahana muqarnas. Ity patio ity dia mifampiresaka amin'ny efitrano amin'ny alàlan'ny andohalambo roa an'ny muqarnas, izay misy valindrihana miorina amin'ny taonjato faha-XNUMX sy efitrano fisoloana akanjo misy lavarangana ivelany.
Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mitsidika ny Torre de la Cautiva?
Ny Torre de la Cautiva dia hisokatra isaky ny talata, alarobia, alakamisy ary alahady amin'ny volana Mey ary azo idirana amin'ny fidirana ankapobeny mankany Alhambra.
Ny Alcazaba, ny Royal House, ny lapan'i Carlos V ary ny Patio de los Leones dia anisan'ny faritra be mpitia indrindra ao amin'ny Alhambra. Toy izany koa ireo Garden Generalife izay miorina eo amin'ny havoanan'i Cerro del Sol. Ny zavatra tsara tarehy sy manintona indrindra amin'ireo zaridaina ireo dia ny fifanatonana eo amin'ny hazavana, ny rano ary ny zava-maniry maniry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Hanokatra ny Torre de la Cautiva ho an'ny besinimaro ihany ny Alhambra amin'ity volana ity ihany